Ndị na-emepụta China na bolt na ndị ahịa | Jiuhe
Ike di nkpa
Mkpochapu nke okpomoku di ire
Na-ekpo ọkụ kpọnwụrụ hexagona ...
U-bolt bụ ihe dị n'ụdị leta leta U ma jiri eriri akpa ya na nsọtụ ya abụọ. Carbon steel U bolt n'ụzọ doro anya na ihe nke U bolt bụ carbon steel.
Ejiri Carbon steel U bolt na mbu iji kwado orụ na - arụ ọrụ, ọkpọkọ nke mmiri na gass gafere. Dika odi, a na-eji U-bolts carbon duru jiri okwunye oru oru. A ga-akọwa carbon U-bolt site nha ọ na-akwado ya. A na-ejikwa Carbon steel U-bolt na-ejikọ ụdọ ọnụ.
Iji maa atụ, ndị injinia na-arụ ọrụ na 40 Nominal Bore U-bolt ga-ajụ maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ anwụrụ, ọ bụ naanị ha ga-ama ihe nke ahụ pụtara. N'ikwu eziokwu, akụkụ ogo 40 ahụ buru obere ihe na-abawanye nha na ogo nke U-bolt.
U-bolt na-ekpo ọkụ
carbon carbon, igwe anaghị agba nchara
galvanized, ọcha ma ọ bụ ọla edo zinc plated ..
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
Mpekere 15-25kgs na pallet, katọn 36 ma ọ bụ 48 n'otu pallet. 25-50kgs akpa egbe akpa na pallet. ma ọ bụ dịka ị rịọrọ.
ndi otu injinia amamịghe nwere ike imepụta ngwaahịa na imepụta dị n’omume, eserese ma ọ bụ naanị echiche
FOB, CIF, CFR, EXW, na ndị ọzọ.
Usoro ịkwụ ụgwọ
T / T, L / C, Western Union, paypal, wdg.
site n'oké osimiri, site na ikuku ma ọ bụ iji gosipụta ọrụ
Nke gara aga: Ike di nkpa
Boltanized mgbochi Bolt na-ekpo ọkụ
Okpukpo hexagonal na-ekpo ọkụ